Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » British easyJet iji malite ụgbọ elu Ukraine
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akwụkwọ akụkọ Italy • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akụkọ UK na -agbasa • Akụkọ na -agbasa Ukraine • Akụkọ dị iche iche
UK mmefu ego easyJet mara ọkwa na enyela ikike ka ọ fega Ukraine na ọrụ ikuku na mba Ọwụwa Anyanwụ Europe nwere ike ịmalite n'oge ọdịda nke 2020.
EasyJet, otu ụlọ ọrụ ụgbọ elu Britain dị ọnụ ala nke nọ n'isi na London Luton Airport, ka enyere ikikere iji rụọ ụgbọ elu na Ukraine ma nwee ike ịmalite ọrụ ahụ n'oge mgbụsị akwụkwọ a.
Dabere na'slọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọdụ ụgbọelu nke Italy ENAC, EasyJet anatalarị ikike ịnya ụgbọelu si totali gaa Ukraine ruo na njedebe nke Ọktoba 2020.
Ndepụta ụzọ gasị erubeghị, mana enweela ozi na ụgbọ elu ahụ ga-enwe ike iji ụgbọ elu 12 na-aga kwa izu gaa Ukraine.
Edere ikike ahụ na July 23 na nkewa nke Austrian nke EasyJet, easyJet Europe Airline GmbH.
Airgbọelu dị ọnụ ala adịghị arụ ọrụ na Ukraine tupu oge a, na Russia bụ naanị mba ndị Soviet na-arụ ọrụ ruo 2016.
a na-ebu agha ọgụ nke mba ndị dị mfe karịa 30 mba karịrị ụzọ 300, gụnyere London, Geneva, Berlin, Newcastle, Paris Orly, Basel, Bristol, na ndị ọzọ. Isi ala ya bụ ọdụ ụgbọ elu Luton nke London. E wezụga Luton, easyJet si ọzọ ehiwe na Europe bụ Milan si Malpensa Airport.
Laa azụ na Disemba 2017, njikwa nke ọdụ ụgbọ elu Lviv nke Ukraine kwupụtara na ha na ụlọ ọrụ ụgbọ elu Britain dị ọnụ ala adịghị mkparịta ụka, ntinye EasyJet ịbanye n'ahịa Ukraine. Otú ọ dị, ọ dịghị mkpebi ikpeazụ emere.
Ná ngwụsị nke Machị 2020, EasyJet kwụsịrị ụgbọ elu niile ebighebi rue oria coronavirus. Airgbọ elu ọnụ ala dị ala maliteghachi njem naanị site na June 15.
Ndị ọrụ ụgbọelu wepụrụ ahịa ụgbọ elu n’etiti Ukraine na intali na Julaị 2020. N’ihi nke a, ụgbọ elu ụgbọ elu ndị Ireland dị ọnụ ala Ryanair kwupụtara mwepụta nke ebe ọhụrụ 16 dị n’etiti Ukraine na astali dị ka akụkụ nke usoro maka oge oyi 2020 na ọkọchị 2021.
N'otu oge ahụ, Wizz Air, ụgbọ elu ụgbọ ala kachasị dị ala na Central na Eastern Europe, ga-amalite ụzọ 14 ọhụrụ site na Ukraine gaa Italytali. A na-eme atụmatụ ịmalite ụgbọ elu mbụ site na August 14, 2020.
Ruo ma ọ dịkarịa ala Ọgọst 15, ndị Ukraine enweghị ike ịga mba ndị EU, gụnyere Italy, n'enweghị nsogbu n'ihi mmachi amachibidoro n'oge ọrịa COVID-19.